MDC-T Inodzinga Zvakare Nhengo Pfumbamwe Kubva muNational Assembly
MDC inotungamirwa naMuzvare Thokozani Khupe, MDC-T, yadzinga dzimwe nhengo pfumbamwe dzakapinda pasi peMDC Alliance muparamende apo kurwisana mubato guru rinopikisa iri kuri kuramba kuchienderera mberi.
Mutauriri weparamende, VaJacob Mudenda, vazivisa kuti dzimwe nhengo pfumbamwe dzeMDC Alliance hadzisisiri nhengo dzeparamende mushure mekunge vanyorerwa tsamba nebato reMDCT.
Nhengo dzadzingwa muparamende dzinoti; VaAmos Chibaya; vanga vachimirira Mkoba, VaHappymore Chidziva vanga vachimirira Highfield; VaMurisi Zwizwai vanga vachimirira Harare Central; pamwe nenhengo dzeproportional representation dzinoti Muzvare Virginia Muradzikwa, Amai Mucharairwa Mugidho, Amai Concilia Majaya, Amai Francesca Ncube, Amai Anna Muyambo, naAmai Nomathemba Ndlovu.
Vave munyori muMDCT, VaDouglas Mwonzora, vaudza Studio7 kuti vadzingwa ava vanga vabuda pachena kuti havasisiri nhengo dzeMDCT yakasiiwa naVaTsvangirai.
Asi mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance, VaClifford Hlatywayo, vati bato ravo harisi kuzoshaya hope nekudzingwa kwaitwa nhengo dzavo muparamende vachiti zvave pachena kuti Zanu PF ndiyo iri kurwisana nebato ravo.
Hatina kukwanisa kutaura nevakafanobata chigaro chemutauriri weZanu PF, VaPatrick Chinamasa, kuti tinzwe pavamire panyaya iyi.
Asi vanoona nezvekufambiswa kwemabasa muZanu PF vakamboudza vatori venhau munguva shoma yadarika kuti sebato havanei nekunetsana kuri kuitika muMDC.
Rimwe gweta remuHarare, VaKudzayi Kadzere, vati dare reparamende rakanganisa nekudzinga kwaraita nhengo pfumbamwe idzi sezvo pachine nyaya dziri mumatare dzakakwidzwa neMDC Alliance dzine chekuita nekudzingwa kuri kuitwa nhengo dzebato iri muparamende.
Kudzingwa kwaitwa nhengo dzeparamende pfumbamwe uku nhasi kwave kureva kuti pave nenhengo gumi nenhatu dzeMDC Alliance dzadzingwa mudare iri nechikwata chaMuzvare Khupe zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wakati VaNelson Chamisa havana kusarudzwa zviri pachena kuti vatungamire bato reMDCT.
Zvichakadai, VaMwonzora vati bato ravo harichaita kongiresi yechimbichimbi yekutsvaga achatsiva vaimbove mutungamiri webato, mushakabvu VaMorgan Tsvangirai, musi wa31 Chikunguru sezvanga zvakatarisirwa nekuda kwechirwere cheCovid-19 asi vati kongiresi iyi ichazoitwa muzuva risati ratarwa.
Kusawirirana muMDC kwakatanga pakaturwa mutongo weSupreme Court wakati VaChamisa havana kusarudzwa zviri pachena kutungamirira bato iri zvakapa kuti vamwe vakaita saVaMwonzora, VaElias Mudzuri, VaMorgan Komichi naMuzvare Khupe vati vachatevedzera mutongo uyu asi vamwewo vakaramba vakaomesa gotsi kuti papata vachiti MDC yakatoita kongiresi yayo kuGweru kwakasarudzwa VaChamisa semutungamiri webato.
Mune imwewo nyaya ine chekuita neMDC, nhengo dzeMDC Alliance dziri mujeri dzinoti mumiriri weHarare West muparamende, Muzvare Joanna Mamombe nevamwe vaviri vanoti Muzvare Cecilia Chimbiri naMuzvare Netsai Marova avo vari kupomerwa mhosva yekunzi vakanyepa kuti vakapambwa vakatochwa vari mumaoko ehurumende, vacharamba vari mujeri kusvika musi weChishanu svondo rino mushure mekunge dare repamusoro rati richatura mutongo waro pachikumbiro chevatu ava chekuti vaphwe mukana wekubhadhara mari yechibatatiso.